Tsy mbola fantatra anefa na mifanila na mifanao ambony ambany ity bileta tokana ity saingy voatazona hatrany ny laharana faha 13 sy 25 ho an’ireo mpifaninana roa. Betsaka ny fanahiana ny Ceni saingy tsy afa-manoatra aloha hatreto satria io no rafitra misy sy eken’ny rehetra.
Hihoatra ny iray alina indray ireo mpampianatra Fram izay horaisina amin’ny taona hoavy. Mba hahahafahana mampitombo ny lenta sy ny traikefa no anton’io fampitomboana io raha ny fanavazana avy amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena. Androany vao manaraka ny fanombohan’ny taom-pianarana 2018-2019 ny sekolim-panjakana any Antsirabe. Mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe ny fampitomboana an’isa ve no tena ilaina sa kosa ny fampiakarana ny lentan’izay efa eo ?
Mety tsy hanohana na iza na iza amin’ireo kandida amin’ny fihodianna faharoa ny Hvm . Tsy mbola nisy mantsy hatreto ny fanambaràna nataon’ny antoko. Ireo mpikambana sasany ihany no mety hanohana fa tsy amin’ny anarana antoko. Inona ny tena lalao izay kasain’ity antoko ity ? Ilaina anefa ny isan-jato izay azon’izy ireo tamin’ny fihodinana voalohany mba hampiadiana amin’ny lalao famaranana. Mandeha ny feo fa noho ny tsy fitiavana an’i Mbola Rajaonah no mahatonga ny antoko mialangalana tsy mahatapa-kevitra hatreto.
Mikarakara taratasy ho any ivelany ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ary raha ny tsilian-tsofina re aza dia mety hanorim-ponenana any mihitsy. Any Lafrantsa no fantatra fa kasainy handehanana. Na izany aza, tsy afaka ny hiorim-ponenana avy hatrany any an-toerana izy sy ny fianakaviany satria mbola hiverina any aminy ny fahefana amin’ny maha-filohan’ny Repoblika azy alohan’ny tena hisian’ny famindram-pahefana amin’ny tapaky ny volana janoary 2019 .
RAJOELINA SY NY VAZAHA
Ny vazaha avokoa no omena vahana tamin’ny kaonferansa izay nataon-dRajoelina momba ny fampandriana fahalemana. Indrindra koa vazaha izay lehiben’ny sampan-draharaha amin’ny asa fitsikilovana ny ankamaroany. Izany no manam-pahaizana noraisina mba hizara traikefa sy homena andraikitra raha lany ny kandidà. Moa va tsy ny fiandrianam-pirenena mihitsy no voahitsakitsaka amin’ny zava-misy sy ny vinan’ity kandidà ity. Ny fiarovana ny sisin-tany sy ny filaminana anatiny dia ny hevitry ny vazaha no alaina. Dia paiso daholo izany ny mpitandro ny filaminana gasy ?
SAOFERANA TAKSIBE NAMPIDI-DOZA
Sady mampiasa finday ny saoferan’ilay taksibe no mamily no tsy vitan’izany fa mbola mandeha mafy koa. Izany no nitera-doza tetsy Soanierana omaly raha ho any Ambohijanaka ilay fiara fitaterana. Naratra avokoa ny mpandeha tao anatiny satria nivadika ny fiara. Ankoatr’izay dia mbola nandona moto ihany koa ary nandratra ny mpitaingina an’izany. Tapaka mihitsy ny lalana omaly ary voatery nihodina izay nandalo teo. Tonga hatrany anosy ny fitohanana vokatr’izany adalan’ ny mpamily izany.
SAVOROVORO TANY MANDRITSARA
Novonoin’ny olona teo imason’ny zandary ny mpivady sy ny zanany roa izay voarohirohy ho namono ny havan’ireo olona. Tany Mandritsara no nitranga izany fitsaram-bahoaka izany. Tsy nisy nidiran’ireo ray aman-dreny akory anefa ny resaka ary efa nanaiky izy ireo ny hanoro izay misy ireo zanany. Tsy naharitra ny olona fa dia novonoina niaraka ireo. Niezaka ny zandary ny nanaparitaka tamin’ny basy saingy tsy nampitsoaka ny olona akory izany.